နိုင်ငံတကာသတင်း Archives - Online Hartha
ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ။ ဒူဘိုင်းမှာ မီးလောင်တာ တစ်ပါတ်ရှိပီတဲ့ (ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ ကမ္ဘာကြီးရယ်)
ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ။ ဒူဘိုင်းမှာ မီးလောင်တာ တစ်ပါတ်ရှိပီတဲ့ (ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ ကမ္ဘာကြီးရယ်) မကြားဘူးတာတွေ မြင်ရတော့မယ် သြော် – – – မိစ်ဆာဒိဋ္ဌိတွေ အင်အားများတဲ့အခါတိုင်းကပ်သုံးပါးဆိုက်တဲ့အကြောင်းတွေ စာပေတွေအမြောက်အများ ဖတ်ရှု့ဘူးခဲ့ပါတယ် အစာရေစာ ရှားပါးတဲ့ကပ်လက်နတ်တွေနဲ့မညှာမတာ သတ်ကြဖြစ်ကြတဲ့ကပ် ရောဂါအမျိုးမျိုး ကျရောက်ပြီ လူတွေသေတဲ့ကပ် အဲဒီကပ်သုံးပါးဆိုက်ပြီဆိုရင် စစ်ဖြစ်လို့သေကြရတယ် ဆယ့်နှစ်နှစ်မိုးခေါင်တာတို့ ဆယ်နှစ်မိုးခေါင်တာတို့စတဲ့ သဘာဝတရားရဲ့ဒါဏ်ခပ်မှု့ကြောင့် အစာရေစာရှားပါးတာတို့အစာရေစာရှားပါးမှု့ကြောင့်ရောဂါမျိုးစုံဝင်ပြီးသေကြ ကြေကြတာတို့ ကိုစာပေတွေမှာအများကြီးဖတ်ရှု့ခဲ့ဘူးတယ် အခုတော့ အဲဒီကပ်သုံးပါး နဲ့ လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့ သီဟိုဠ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပေါင်းသန်းနဲ့ချီပြီးအသတ်ခံရတာတွေ သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့လို့ရဟန်းသံဃာတော်တွေအမြောက်အများအသက်ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေဟာ ကြားပဲကြားဘူးပေမဲ့ အခုတော့ ကြုံတွေ့ရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီး တကြော့ပြန်ထွန်းကားဖို့ မကောင်းသူတွေကိုဒဏ်ခတ်ရင်း ကောင်းသူတွေပါ သေကြကြေကြရတာဟာ သံသရာရဲ့ ဝဋ်ကြွေးတခုလေများလား တွေးမိတယ် တခါ ကပ်ဆိုက်တိုင်း လူဆိုးတွေပျက်စီးရပြီးလူကောင်းအနည်းငယ်သာ … Read more
ဇနီးသညျမသဆေုံးခငျက ပခေဲ့တဲ့ပကွေိုးခှလေေးကို ပွနျကောကျဖို့တံတားပျေါကနေ ခုနျခခြဲ့တဲ့ အမြိုးသား ရဲ့ အဖွဈ
July 26, 2020 by Online Hartha
တချို့သောအရာဝတ္ထု ပစ္စည်းလေးတွေက ကိုယ့်အတွက်တော့ ပုံမှန်ပဲ သုံးလို့မရတော့တဲ့အရာဝတ္ထုတွေဆိုပေမဲ့လည်း အခြားသူတစ်ယောက်အတွက်တော့အဆိုပါအရာဟာ အမှတ်တရတွေများစွာရှိခဲ့လို့ တော်တော်လေးကိုတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေပါ ။ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံက အသက်41နှစ်အရွယ် ပန်းပဲသမားဟာ ဇနီးသည်မသေဆုံးခင်က နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေးခဲ့တဲ့ ပေကြိုးခွေလေးကိုပြန်ကောက်ဖို့ ပင်လယ်ထဲကိုခုန်ချခဲ့ပါတယ် ။ဖြစ်စဉ်ကတော့ အဆိုပါအမျိုးသားဟာ ရွှံ့ဗွတ်တွေထူလွန်ပြီး ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ တံတားအသစ်လေးအပေါ်မှာ အေးအေးလူလူလမ်းလျှောက်နေတုန်း ပေကြိုးခွေလေးကိုထုတ်ကြည့်ခဲ့ပုံရပါတယ် ။ထို့နောက် ပေကြိုးခွေလေးဟာ ၎င်းအမျိုးသားလက်ထဲကနေ ချော်ထွက်သွားခဲ့ပြီး ရွှံ့ ထူလွန်းတဲ့ ရေထဲသို့ကျသွားခဲ့ပါတယ် ။ သာမှန်လူတစ်ယောက်သာဆိုရင်တော့ အဆိုပါတန်ဖိုးမကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့အတိုင်းထားလိုက်ကြမှာပါ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအမျိုးသားကတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး ။ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကို ဘားမှမစဉ်းစားနိုင်တော့ပဲ ရွှံ ဗွတ်ထူလွန်းတဲ့ ရေထဲကိုခုန်ချပြီး ပေကြိုးခွေလေးကို ပြန်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။သို့ပေမဲ့လည်း ရွှံ့ ဗွတ်ဟာအတော်လေးကိုနက်ခဲ့တဲ့အတွက် တံတားပေါ်ပြန်မတက်နိုင်ခဲ့ဘဲ ရေထဲကနေအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းခံခဲ့ရပါတယ် ။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ အခြားအမျိုးသားတစ်ဦးဟာ လမ်းလျှောက်လာတုန်း ပန်းပဲဆရာရဲ့ ဦးထုပ်နဲ့ဖိနပ်ကျန်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိပြီး တံတားအောက်သို့လှန်းကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ … Read more
ပုဇွန်တွေ ထဲမှာ အစားထိုး အသားတုတွေ ထည့်နေကြတာကို ၀င်ရောက် စစ်ဆေးရင်းတွေ့ရှိ အရေးယူ (ရုပ်သံ)
July 23, 2020 by Online Hartha
ပုဇွန်တွေ ထဲမှာ အစားထိုး အသားတုတွေ ထည့်နေကြတာကို ၀င်ရောက် စစ်ဆေးရင်းတွေ့ရှိ အရေးယူ (ရုပ်သံ) အစားအသောက်အဆိပ်သင့်နေကြပြီလား လူသားတွေ…. ကြက်သားရောင်းတဲ့သူတွေဟာ ကြက်ကလေးတွေ အမြန်ကြီးထွားဖို့ ၃ ၄ လလောက်စောင့်မယ့် အစား အမြန်ကြီးထွားစေတဲ့ ဟော်မုန်းဆေးတွေ သုံးကြတယ် ၊အဲ့ကြက်သေကို တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းတဲ့ ကြက်သားသည်က ဓာတုဆေး တစ်မျိုးထိုးလိုက်တော့ ကြက်သေကြီးက ဖောင်းကားလာတယ် ဖောင်းလာတဲ့ ကြက်သေကို ရေထိုးလိုက်တော့မှ အလေးချိန် တိုးပြီး ရေက အပြင်မထွက်တော့ဘူးလေ…ငါးမွေးမြူရေးခြံတွေ သွားကြည့်ပါ အများဆုံးကတော့ ကြက်ခြံ ၀က်ခြံတွေရဲ့အောက်မှာမွေးမြူထားကြတယ် ငါးစာခို တွက်ခြေကိုက်ဖို့ပေါ့ ကြက်တွေ ၀က်တွေက ဓာတုဆေးစားထားတဲ့ ချီးကို စားတဲ့ငါးတွေဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ ပုဇွန်ဆိုရင်လဲ ဈေးကောင်းတော့ အလေးချိန်စီးအောင် ခေါင်းမှာ ခဲထိုးထည့်ကြတယ် ခု Vedio ဖိုင်ကတော့ … Read more
အသတ်ခံရသောမိသားစုဝင်(၅)ဦးအတွက် အထူးသတိရ ဆုတောင်းပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံခြင်း …
July 4, 2020 by Online Hartha
ဗန်းမော် (၅)လောင်းပြိုင် လူသတ်မှု့ အသတ်ခံရသောမိသားစုဝင်(၅)ဦးအတွက် အထူးသတိရ ဆုတောင်းပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံခြင်း … (၅) လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု့ 3/7/2020 ဗန်မော် ( မန်စီခရိုင်) မန်ဂျယ် ဒိန်စီ အင်ဘပါလမ်း၊ ဂိုင်ဒေါ်ကျေးရွာ၌ ဇူလိုင်လ၊ ၂ ရက်နေ့ည မိသားစုဝင် ၅ ဦး ဓားခုတ်သတ်ခံရကြောင်းကြားသိရပါတယ်။ အသတ်ခံရသောသူများ ၁။ ဒေါ်ယမ်ထု (အသက်(၇၀)) ၂။ ဦးယာကုလဇိန်တန်ဂွန်(ဖခင်) ၃။ ဒေါ်မော်ရိန်းဆွမ်လွတ်ထုနန်(မိခင်) ၄။ မောင်လဇိန်ဆန်လီနော် ၅။ မောင်လဇိန်ဒွဲဆန်အောင် တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ သားကြီးဖြစ်သူ အသက်(၁၃) နှစ်အရွယ်တစ်ဦးတည်း ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စိတ်ကြောင့် စကားမပြောနိုင်တော့ပါ။ ယခု အသတ်ခံရသော မိသားစုဝင်များ နေအိမ်သို့ ဒိန်စီတိုက်နယ်မှ တာဝန်ခံဘုန်းတော်ကြီး Rev. Fr Paul Lahpai Awng … Read more
အမှိုက်ကောက်သူ အညတြ လူတန်းစား အတွက် သူဋ္ဌေးအိပ်မက် ဖြစ်ရပ်ဆန်း ကောင်းချီးပေးမှု့
July 2, 2020 by Online Hartha
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖိစနုလို့မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ အသက် (၅၅) နှစ်အရွယ် Prayak Romsantiea သည် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ ညနေ ၁၆:၃၀ ချိန်တွင် ထိုင်းအစိုးရရဲ့ ထီလက်မှတ် နှစ်စောင်ကိုကိုင်ကာ ပထုန်ဌာနီခရိုင် ခလောင်းဟာ့ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းထဲဝင်လာပြီး ထီပထမဆုကြီးဖြစ်တဲ့ ထီနံပါတ် 347258 နှစ်စောင် ၊ ဘတ် ၁၂ သန်းပေါက်ကြောင်း လာရောက်သတင်းပို့ကာ ရဲစခန်းတွင်မှတ်တမ်းရေးသွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ။သူဟာဘန်ကောက်မြို့နှင့်မနီးမဝေး ပထုန်ဌာနီခရိုင်တွင်လာရောက်၍ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် အမှိုက်ပုံများတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအဟောင်းများလိုက်လံစုဆောင်းကောက်ယူပြီးကီလိုအဟောင်းဆိုင်တွင်ပြန်ရောင်းလေ့ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ။ ဒီထီနံပါတ်ကိုတော့ သူ့ရဲ့အိပ်မက်ထဲတွင် ဂဏန်း ၆ လုံးစလုံး ဒဲ့လာရောက်ပေးခဲ့သဖြင့် ထိုးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ် ။ Photo #Credit Unicode Version ထိုငျးနိုငျငံ ဖိစနုလို့မွို့မှာနထေိုငျတဲ့ အသကျ (၅၅) နှဈအရှယျ Prayak Romsantiea သညျ … Read more
နေအိမ်မှတိတ်တဆိတ် ပျောက်ဆုံးသွားသော မိခင်အား သားဖြစ်သူမှ လူပျောက်မှုဖြင့် တိုင်ချက်ဖွင့်ခဲ့ရာ
June 20, 2020 by Online Hartha
နေအိမ်မှတိတ်တဆိတ်ပျောက်ဆုံးသွားသောမိခင်အား သားဖြစ်သူမှလူပျောက်မှုဖြင့်တိုင်ချက်ဖွင့်ခဲ့ရာ ဖခင်ကိုယ်တိုင် သတ်ကာနေအိမ်ခြံထဲတွင်အလောင်းဖျောက်ဖျက်ထား… ဇွန်လ ၁၉ ရက် ၊ ရတ်ခ်ျဘူရီလွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့ကတည်းက ထူးဆန်းစွာ နေအိမ်မှတိတ်တဆိတ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ မိခင်ကို သားဖြစ်သူမှလူပျောက်တိုင်ချက်ဖွင့်ထားရာမှ အိမ်နှင့်မနီးမဝေး ပေ ၁၅၀ အကွာရှိ ရေတွင်းအဟောင်းထဲတွင် မသင်္ကာသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှမြေတူးစက်ဖြင့်တူးဖော်ကြည့်ရာ အလောင်းအားတွေ့ရှိခဲ့ပြီး လူသတ်တရားခံသည် အသက် ၈၃ နှစ်အရွယ် သေဆုံးသူ၏ခင်ပွန်းဖြစ်နေဟု ရဲမှူးချုပ်မှ Anuphat မှယနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရ ။ဖြစ်စဉ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ လတ်ခ်ျဘူရီခရိုင် ကျော့ဘွန့်မြို့နယ် ဒန်ထပ်တကိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ရပ်ကွက် ၁၆ တွင်နေထိုင်သော အသက် ၆၆ နှစ် အရွယ် Mrs.Nansukanya Janitprasart သည် လွန်ခဲ့သည့် ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့ကတည်းက ထူးဆန်းစွာနေအိမ်မှပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့် သားဖြစ်သူ Mr. … Read more
​မော်​ဒယ်​တစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​ပေမဲ့ ဘဝမ​​မေ့ပဲ မိခင်​နဲ့ အတူ အမှိုက်ပုံးထဲက ပစ္စည်းတွေကို ကောက်​နေတဲ့ ​မော်​ဒယ်​မ​လေး
June 8, 2020 by Online Hartha
မော်​ဒယ်​တစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​ပေမဲ့ ဘဝမ​​မေ့ပဲ မိခင်​နဲ့ အတူ အမှိုက်ပုံးထဲက ပစ္စည်းတွေကို ကောက်​နေတဲ့ ​မော်​ဒယ်​မ​လေး ထိုင်းနိုင်ငံက Miss တစ်ယောက် သူ့ဘဝ ရဲ့ နောက်ကြောင်းကို သိလိုက်ရချိန်မှာ အံ့အားသင့်သွားကြပါတယ် သူမ အမေ ဟာ အမိုက်ကောက်ရင်းအမှိုက်ပုံးထဲက ပစ္စည်းတွေကို ကောက်ပြီးလုပ်စားပါတယ်။ သမီးဟာ သူ့ဘဝအမှန်ကိုဖုံးကွယ်မထားပဲ Miss ဖြစ်လာတော့လည်း သူ့အမေ ကို ကူရင်းဘဝကို ရုန်းကန်တယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။ လူတိုင်းအားကျအတုယူသင့်ပါတယ်နော်…။ တစ်ချို့ဆို တစ်ချိန်က ဆင်းရဲစွာ ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာ ချမ်းသာသွားသော်လဲ အရင်က ဆင်းရဲခဲ့တဲ့ဘ၀ကိုမေ့ပြီး အသုံးအဖြန်းကြီး ခြွေတာစုဆောင်းမှုမရှိသောကြောင့် ပြန်ပီးမွဲတေသွားတဲ့သူတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။ အတိတ်ဘ၀ကို မမေ့သင့်သလို ကိုယ့်မိဘကိုလဲ ဘယ်တော့မှ မမေ့ကြပါနဲ့။ unicode မျော​ဒယျ​တဈ​​ယောကျ​ဖွဈ​​ပမေဲ့ ဘဝမ​​မပေဲ့ မိခငျ​နဲ့ အတူ အမှိုကျပုံးထဲက ပစ်စညျးတှကေို … Read more
အမှိုက်ပုံတွေကြားထဲမှ (78) နှစ်အရွယ် အဘိုးအိုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်…
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေပြီး ကူညီဖေးမမဲ့ သားသမီးဆွေမျိုးတွေမရှိဘဲ အသက်ဆက်ရှင်နေရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အများအပြားရှိပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း မလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ အသက် (78) နှစ်အရွယ်အဘိုးအိုကို သူ၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ လူတွေက တစ်ပတ်ခန့်တွေ့ရှိခြင်းမျိုးမရှိတော့တာကို သတိထားမိပြီးနောက် ရဲအရာရှိတွေကို အဘိုးအိုပျောက်ဆုံးနေကြောင်း တိုင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ် ။ အဘိုးအိုကို အမြဲတွေ့ရှိနေကြ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ အဘိုးအိုဟာနေအိမ်ကနေထွက်ပြီး Rompin မြို့တစ်လျှောက် အမြဲလည်ပတ်သွားလာနေလေ့ရှိပေမဲ့လည်း အဘိုးအို၏နေအိမ်အတည်တကျကိုတော့ မည်သူကမှ သိရှိခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး ။ထို့ကြောင့် တာဝန်ရှိသူများက အဘိုးအို၏နေအိမ်ကို စုံစမ်းပြီး သွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ချိန်မှာတော့ မထင်ထားလောက်အောင် အဘိုးအို၏နေအိမ်မှာ အမှိုက်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီး အမှိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ။ သတင်းအရ အဘိုးအိုဟာ အဆိုပါနေအိမ်ကို တစ်လ RM 30 ဖြင့်ငှါးရမ်းကာ နှစ်ပေါင်း 20 ခန့်နေ ထိုင်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။ နေအိမ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ … Read more
ကိုယ်တော်ကြီး နတ်ဝင်ပူးနေချိန် ဓါးပြီးကြောင်း စမ်းပြခဲ့သည့် နတ်ကတော် မပြီးပဲ သေဆုံး (ရုပ်သံ)
June 6, 2020 by Online Hartha
(ရုပ်သံဖိုင်ကို အောက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်) ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသ ချင်းမိုင်ခရိုင် စံကမ်ဖလ် မြို့နယ်နေ အသက်(၂၅)နှစ် အရွယ် ထက်ပရစ်ပါလီ အမည်ရ နတ်ကတော်ဟာ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့လမ်းနား(မြို ဟာင်းနံမည်) နတ်ပွဲသဘင်ပေးနေချိန်မှာ နတ်ဆရာ တဦးဟာ နတ်ပူးနေရင်း မိမိကိုယ် ဓါးနဲ ပြန်ထိုးခဲ့မိလို အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာရှေးဟောင်း ကိုယ်တော်ကြီး နတ်ဝင်လာပြီဆိုရင် တခိုးအစွမ်းတွေပြ လာပြီး“နတ်စွမ်းလို ပွဲတိုင်းကျော် လာခဲ့နော်”လမ်းနားတို ပြည် စတဲ့ နတ်ဒိုးသီချင်းတွေနဲ ကပါတယ်၊ပြီးဆိုရင် ကိုယ်တော်ကြီးက ဓါးနဲ သူ့ကိုယ်ကို အကြိမ်ကြိမ် ထိုးလိုက်ခုတ်လိုက်လုပ်ပြတာကိုပရိတ်သတ်တွေက အားပေးကြ၊ ဆုတော်ငွေတွေ ဆက်သနေကြတာပါ။ သူဟာခုလို နတ်ပွဲကို ကပြနေတာ ခြောက်နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်နတ်ပွဲမှာတော့ ခါတိုင်းလို နတ်ဝင်ပူးနေရင်း ဓါးနဲ့ ရင်အုံကိုထိုးပြခဲ့ရာမှာ ဓါးစိုက်ဝင်သွားခဲ့တဲ့ နေရာဟာ နှလုံးသားတည့်တည့် ဖြစ်နေတာကြောင့် သွေးထွက်လွန်ပြီး ကိုယ်တော်ကြီးသေဆုံးခဲ့ရတာလို့ သိရပါတယ်…။ ##ခရက်ဒစ် … Read more